1 NAFTAADA ILAALI! Aqoon aasaasi ah oo ku saabsan cudurada galmada lagu kala qaado
2 NAFTAADA ILAALI! - Aqoon aasaasi ah oo ku saabsan cudurada galmada lagu kala qaado Qoraalkan dadka akhristaa waxay ka helayaan aqoon ku saabsan sida loo kala qaado cudurka HIV-ga, waxay kaloo ka helayaa warar ku saabsan cudurada kale ee galmada lagu kala qaado. Qoraalkan ujeedadiisu waa in lagu dhiirgeliyo in qofku uu iska baaro cudurada galmada lagu kalo qaado, haddii uu qofku kondom la aan galmo sameeyo, ka dibna uu ka shakiyo inay suuragal tahay inuu cudurada qaaday. Qof walba xil baa ka saaran caafimaadkiisa iyo hab dhaqanka galmadiisa. Ma aha inaad mar walba aammintid in qofka aad galmada wada samaynaysaan uu yahay qof caafimaad qaba, xitaa haduu qofku sidaas ku yiraahdo. Waxaa jira cudurro badan oo galmada lagu kala qaado oo aan astaamo lahayn, waxaa xitaa dhici karta in qofka cudurka qabaa aanu is ogeyn inuu cudurka qabo. Cudurada galmada lagu kala qaado, haddii aan layska daaweyn waxay keeni karaan waxyaabo kala duduwan, tusaale ahaan infakshan, cillado kalagoysyada ah, ma dheleysnimo (ragga iyo dumarkaba). Sida ugu weyn ee uu qofku ku qaadi karo cudurada galmada waa, inuu qofku kondom la aan galmo sameeyo! Sida keliya ee laysaga ilaalin karo cudurada galmada waa in kondom la isticimaalo! 2 Haddii aad ka shakido inaad cudurka qaaday, waa inaad isbaartaa. Cudurada galmada lagu kala qaado baaritaan uun baa lagu ogaan karaa. Xasuuso, dadka aad galmada la samaysayna waa in la baaraa.
3 HIV IYO AIDS HIV (Human Immunodeficiency Virus) waa fayras meel walba oo adduunka ah ka jira oo burburiya nidaamka difaaca ee jirka. Fayrasku wuxuu daciifiyaa qofka isdifaacidiisa, taas oo keeneysa in jirrooyinka kala duduwani ay qofka si sahlan ugu dhici karaan. Sidee loo qaadaa Fayraska HI (Hi-virus)wuxuu qofka ugu dhici karaa, haddii dhiig, ama shahwada ragga ama dheecaanka hore ee ragga ka yimaadda ama dheecaannada siilka oo uu ku jiro fayraska HI uu gaaro xuubabka dheecaanka ama meel jirka ah oo nabar ah, sidaasna uu fayrasku ugu darsamo wareegga dhiigga ee qofka. Fayraska HI (Hi-virus) wuxuu qofka ugu dhici karaa isagoo u raacaya caanaha hooyada. Cudurka HIV-ga wuxuu qofka ku dhici karaa, haddii qofku uu kondom la aan galmo sameeyo. Nabarada iyo cudurada galmada lagu kala qaadaa waxay sii kordhin karaa khatarta ah inuu qofku qaado cudurka HIV-ga. Astaamaha Waxaa dhici karta in qofku muddo dheer aanu lahayn astaamaha cudurka HIV-ga. Muddo ka dib waxaa daciifaya awoodda difaaca ee jirka, waxaana bilaamaysa inuu jirku daciif u noqdo inay cudurro kala duwan ku dhacaan. Ilaa inta heerkaas laga gaarayo iyadoon daawo la isticimaalin waxay qaadan kartaa sannado badan. Waxaa muhiim ah in cudurka si dhakhso ah loo ogaado, dhakhsana loo daaweeyo. Markaas waxaad sidaas ku ilaalinaysaa naftaada iyo qofka galmadu idinka dhaxayso, sidaas baadna uga hortegi kartaa faafi idda cudurka. Midda 3
4 kale waxaa suuroobeysa in daawada la bilaabo wakhtigii loogu talagalay. Daaweynta Laga soo bilaabo sannadkii 1996 Finland waxaa laga isticimaalaa daawooyin waxtar weyn leh. Daawada Antiretroviraali waa daawo yaraysa taranka fayraska. Daawadu waxay keeneysaa in nidaamkii difaaca jirka ee daciifay ay awoodiisu soo noqoto oo gaarto ilaa heer ku dhow kan caadiga ah. Hase yeeshee daawooyinka hadda jiraa ma awoodaan inay fayraska jirka ka saaraan oo ka dhammeeyaan. Cudurka HIV-ga waxaa lagu kala qaadi karaa kondom la aan galmada ah iyo galmada afka, xitaa iyadoo daawada la isticimaalo. 4 Aids Infakshanka HIV-ga heerkiisa ugu dambeeya ayaa waxaa loo yaqaan AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Aids-ka diagnoosigiisa waxaa la sameeyaa marka awoodda difaaca ee jirku ad u daciifto, qofkana uu ku dhaco mid ka mid ah cudurada kale ee dheeraadka ah ee HIV-ga la xiriira.
5 BAARITAANKA LAGU OGAADO HIV-ga Baaritaanka waxaad tagtaa markay 3 bilood ka soo wareegto wakhtigii ay suuragalka ahayd inaad cudurka qaaday, markaas jawaabta baaritaanku waa mid aamminaad leh. Baaritaanka waxaa la sameeyaa iyadoo la baarayo dhiig laga qaado suxulku meeshuu ka laabmo ama dhiigga waxaa laga qaadaa farta. Jawaabta waxaa la ogaadaa 1-3 todobaad. Dhiigga farta laga qaado si degdeg ah ayaad ku ogaan kartaa, jawaabtana waxaad heleysaa 15 daqiiqo ka dib. Goobaha Xarunta Taageerada ee Aids-ka ayaad adigoon magacaaga sheegin iskaga qaadi kartaa baaritaanka lagu baarayo inaad cudurka qaaday iyo in kale, baaritaanku waa lacag la aan. Waxaa kaloo iyana baaritaanka HIV-ga sameeya rugaha caafimaadka ee xaafadaha, goobaha la yiraahdo Pluspiste ee Ururka Laanqayrta Cas ee Finland, bolikilinigyada qaabilsan cudurada wasmada ku faafa, laanta daryeelka caafimaadka ardayda, laanta daryeelka shaqaalaha iyo xarumaha dhakhaatiirta barayfitka ah (waa lacag). Xarunta Taageerada ee Aids-ka (Helsinki, Tampere, Turku iyo Oulu) markaad baaritaanka u tagto ayaad weydiin kartaa wixii su aalo ah ee HIV-ga la xiriira ee adiga welwel kugu haya. Haddii lagaa helo cudurka HIV-ga, shaqaalaha xarunta taageerada ayaad ka heleysaa wixii taageero iyo talooyin ah ee aad u baahan tahay. 5
6 Markaad rabto inaad baaritaan iska qaado, waa inaad ballan ka qabsataa lambarka heeganka ee Xarunta Taageerada ee Aids-ka oo ah Lambarku wuxuu heegan yahay Isniinta ilaa Jimcaha saacadaha u dhexeeya (10 subaxnimo ilaa 3.30 galabnimo). Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada Xarunta Taageerada ee Aids-ka waxaad ka heleysaa boggagayaga internetka: / 6
7 KALAMUUDIYA = CHLAMYDIA (KLAMYDIA) Sidee loo qaadaa Waxaa lagu kala qaadaa markuu u gudbo xuubabka dheecaanada iyo haddii aan kondom la isticimaalin galmada ah iyo galmada afka. Astaamaha Astaamaha waxaa la dareemi karaa markay wakhtiguu qofku cudurka qaaday ka soo wareegto maalmood, laakiin cudurka kalamuudiyadu inta badan astaamo ma laha ama astaamihiisu waa daciif. Kalamuudiyada haddii aan layska daaweyn waxay dumarka u keeni kartaa infakshan ku dhaca xubnaha dhalliinka, waxay kaloo ragga iyo dumarkaba u keeni kartaa infakshan ku dhaca kalagoysyada iyo ma dheleysnimo. Daaweynta Daaweynta uu dhakhtarku qoro: kuuro antibiootig ah iyo baaritaan kontorool ah. 7
8 CONDYLOMA ama HPV (fayraska papillooma ee biniaadanka ku dhaca) Sidee loo qaadaa Waxaa lagu kala qaadaa galmada iyo haddii uu taabto xuubabka dheecaanka iyadoo aan kondom la isticimaalin. Astaamaha Dadka fayrasku ku dhaco qaar ka mid ah baa astaamaha lagu arkaa. Cudurkan HPV qofka qaba ee astaamuhu ka muuqdaan finan yar yar (= kondyloomia) baa waxay ka soo baxaan xubnaha taranka. Haddii aanu astaamo lahayn, waxaa dhici karta inuu dumarka u keeno cudurka kansarka. 8 Daaweynta Haddii aad ka shakido inuu cudurkani kugu dhacay, dhakhtar u tag. Dhakhtarka ayaa ku baaraya wuxuuna kuu qorayaa daawada loo baahan yahay wuxuuna kuu ballaminayaa baaritaanka kontoroolka ah.
9 HERPES Herpes wuxuu noqon karaa mid bishmaha ka soo baxa ama wuxuu noqon karaa mid ku dhaca xubnaha taranka. Sida loo qaado Waxaa la qaadaa haddii uu taabto meel nabar ah, ama nabar qolof saarantahay ama meel fin ah. Waxaa kaloo lagu qaadi karaa haddii galmo lala sameeyo qof qaba cudurkan noociisa xubnaha taranka, cudurkan noociisa bishmaha waxaa lagu kala qaadaa galmada afka oo sidaas buu ugu gudbi karaa xubnaha taranka ama bishmaha. Herpeskahaddii aanu astaamo lahayn sida caadiga ah laysma qaadsiiyo. Astaamaha Astaamaha herpeskuwaxay muuqdaan markay wakhtiguu qofku qaaday cudurka ka soowareegaan 2-12 maalmood. Inta badan astaamuhu waa meesha cudurka qabta ayaa waxay yeelataa xanuun iyo cuncun. Meesha cudurka qabta waxaa ka soo baxa finan dheecaan ku jiro, finanku dhowr maalmood ka dib ayey dilaacaa, ka dibna qolof baa fuusha. Herpesjirkuu si qarsoodi ah ugu haraa. Waxaa laga yaabaa inuu qofka ku soo cusboonaado, haddii tusaale ahaan uu qofku isteres yeesho ama shaqada jirku nuglaato infakshan kale dartiis, dumarkana wakhtiga caadada oo kale. Daaweynta Herpesku ma laha daawo baabi sa laakiin astaamaha cillada waa la yarayn karaa ama waa laga hortegi karaa iyadoo daawo la isticimaalayo. 9
10 JABTADA (jabtida) Sidee loo qaadaa Haddii aan kondom la isticimaali waxaa lagu kala qaadaa wasmada galmada ah iyo wasmada afka. Gacmuhuna waxay u gudbin karaan indhaha. Astaamaha Astaamuhu waxay qofka ka muuqdaan markuu cudurka qaado 1-14 maalmood ka dib, Laakiin cudurka jabtadu wuxuu noqon karaa mid aan astaamo lahayn. Astaamuhu waxay noqon karaan kaadida oo qofka gubta. Jabtada dabada ku dhacdaa inta badan astaamo ma laha. Jabtada gacmaha ku faaftaa waxay keeni kartaa infakshan indhaha ku dhaca. Jabtada haddii an layska daaweyn waxay ragga iyo dumarkaba u keeni kartaa ma dheleysnimo. Daaweynta Daaweynta uu dhakhtarku qoro: kuuro antibiootig ah iyo baaritaan kontorool ah. 10
11 WARAABOW AMA XABBAD (KUPPA) Sidee loo qaadaa Haddii aan kondom la isticimaali waxaa lagu kala qaadaa wasmada galmada ah iyo galmada afka. Astaamaha Astaamuhu waxay qofka ka muuqdaan markuu wakhtiguu cudurka qaaday ay ka soo wareegto 3-6 todobaad. Marka hore qofku wuxuu isku arkaa astaamaha hore oo khafiif ah (dhaawac bilow ah iyo qanjirada sinta gudeheeda oo barara). 2-4 bilood ka dib qofku wuxuu isku arkaa astaamo daran (qandho, xanuun, dhuun xanuun iyo astaamo maqaarka ah). Cudurka waraabowga haddaan la daaweyn wuxuu isu beddeli karaa heerka dambe ee syphilis, kaas oo sannado ka dib dhaawac u geysta xubnaha xarunta dareenka laga xukumo iyo xubnaha wareegga dhiigga. Treatment Prescribed antibiotics by doctor and control sample. 11
12 CAGAARSHOWGA B (HEPATIITTI B) Cagaarshowga B waa infakshan beerka ku dhaca. Sidee loo qaadaa Waxaa lagu kala qaadaa dheecaanka shahwada, dheecaanka siilka iyo dhiigga. Dadka uu cudurku ku dhaco qaar ka mid ah waxay isku arkaan astaamaha cagaarshowga B infakshankiis. Astaamaha Astaamuhu waxay qofka ku bilowdaan markay maalmood ka soo wareegaan wakhtiguu cudurku ku dhacay. Bilowga hore cudurka cagaarshowgu astaamo ma laha. Astaamaha ugu horeeya waxaa ka mid ah murqo xanuun, lalabbo, daal, cunto xumo(abitayd la aan), mantag, shuban iyo qandho. Astaamaha kale ee cudurku leeyahay waa maqaarka iyo indhaha qaybtooda caddaanka ah oo midabkoodu jaalle noqdo iyo kaadida oo xoogaa madow noqota. Daaweynta Cudurka waad ka hortegi kartaa oo waad iska tallaali kartaa. Dhakhtar waa inaad u tagtaa. 12
13 CAGAARSHOWGA C (HEPATIITTI C) Cagaarshowga fayraska C waa cudur infakshan beerka ah oo koronik ah. Sidee loo qaadaa Waxaa lagu kala qaadaa dhiigga, Sida ugu badanna waa markay dadka isticimaala daroogooyinka xididka layskaga duro wada isticimaalaan silingeyaasha iyo cirbadda silingaha afkiisa. Cagaarshowga C waxaa kaloo lagu kala qaadaa haddii kondom la aan qof cudurka qaba wasmo lala sameeyo. Astaamaha Astaamuhu waxay qofka ku bilowdaan markay maalmood ka soo wareegaan wakhtiguu cudurku ku dhacay. Bilowga hore cudurka cagaarshowgu astaamo ma laha. Astaamaha ugu horeeya waxaa ka mid ah murqo xanuun, lalabbo, daal, cunto xumo(abitayd la aan), mantag, shuban iyo qandho. Astaamaha kale ee cudurku leeyahay waa maqaarka iyo indhaha qaybtooda caddaanka ah oo midabkoodu jaalle noqdo iyo kaadida oo xoogaa madow noqota. Daaweynta Qiyaastii boqolkiiba ah dadka uu cudurku ku dhaco kama baxo oo waxay noqdaan dad cudurka sida. Ma jiro tallaal lagaga hortago cagaarshowga nooca fayraska C -da. Cagaarshowga A (Hepatiitti A) wasmada laguma kala qaado! 13
15 INJIRTA BISQINTA AMA SHUUNKA (SATIAISET) Waa injir yar yar oo midabka jirka oo kale leh oo dhererkoodu yahay 1-3 millimitir. Jirka ayey dhiigga ka nuugaan, shuunka (bisqinta) ayeyna ugxan ku dhalaan. Sidee loo qaadaa Waxaa lagu kala qaadaa gogosha sariirta iyo haddii jirku istaabto. Astaamaha Bisqinta ama shuunka ayey injirtan yar yar waxay u keentaa cuncun. Astaamuhu waxay bilowdaan markuu qofku qaado 1-3 todobaad ka dib. Daaweynta Injirtan yar yar waxaa lagu daaweeyaa shaambo daawo ahoo farmashiyada lagu gado. Sida caadiga ah waxaa fiican inaad todobaad ka dib daawada haddana mar kale isticimaasho. Markaad daawada bilowda, waa inaad kastuumooyinka iyo dharka gogosha iyo shukumanadaba dhaqdaa oo iska beddeshaa. 15
16 SCABIES (SYYHY) Scabies waxaa keena dulin la yiraahdo sarcoptes scabiei (syyhypunkit) oo dhererkiisu yahay 0,3-0,5 millimitir. Sidee loo qaadaa Markuu jirka taabto ayaa la qaadaa. Cudurkan haddii wasmada lagu kala qaado, wuxuu leeyahay astaamo aad u daran, gaar ahaan fiidkii iyo habeenkii. Astaamaha Cuncun bilowda markay wakhtiguu qofku cudurka qaaday ka soo wareegto 3-6 todobaad. Jirka waxaa ka soo baxa calaamado iyo finan yar yar oo biyo galeen. Haddii finanka la xoqo, waxay keeni karaan inuu jirku infakshan yeesho, finankuna dheecaan jeeshaan. Daaweynta Dulinka sarcoptes scabiei waxaa layskaga daaweeyaa daawo dareere ah oo farmashiyaha laga helo. Daawada markaad isticimaasho waa inaad haddana todobaad ka dib mar labaad isticimaashaa. Dadka guriga lagu wada nool yahay iyo qofka wasmadu idinka dhaxayso waa in la daaweeyaa, xitaa haddii aanay weli lahayn astaamaha cudurka. 16
19 HAWSHA HIV-GA EE DHAQAMADA KALA DUDUWAN EE XARUNTA TAAGEERADA AIDS-KA (AIDS- TUKIKESKUKSEN MONIKULTTUURINEN HIV-TYÖ) Hawsha HIV-ga ee dhaqamada kala duduwan waa in laysku dayo in la kordhiyo aqoonta ay dadka waddanka u soo guurey u leeyihiin HIV-ga iyo in laga hortag faafitaanka cudurka HIVgu, si aanu ugu faafin dadka waddanka u soo guurey dhexdooda. Waxaa kaloo laysku deyeyaa in dadka uu ku dhacay cudurka HIV-gu iyo ehelkooduba ay helaan taageero ay ka helayaan dad ay isku xaalad ku sugan yihiin. Hawshan hadafkeedu waa in horumar lagu sameeyo hababka iyo hawlaha cusub ee ku saabsan ka hortagga cudurka iyo taageerada uu qofka cudurka qaba iyo ehelkiisu ka helayaan dadka kale ee ay isku xaaladda ku sugan yihiin. Hawsha HIV-ga ee dhaqamada kala duduwan waxay ka kooban tahay: tababarro loogu talagalay dadka waddanka u soo guurey tababarro loogu talagalay dadka ka shaqeeya xirfadaha kala duwan ee caafimaadka iyo arrimaha bulshada waxqabadyada taageerada laga helo dadka isku xaaladda la yahay wargelinta caalamiga ah iyo ogaanshaha hawlaha caalamiga ah horumarinta adeegyada iyo tababarrada ee Xarunta Taageerada ee Aids-ka waxaa loogu talagalay dadka waddanka u soo guurey 19
20 Aasaasiyadda HIV-ga / Xarunta Taageerada ee Aids-ka Lambarka laga gudbiyo telefoonada (Isniinta Jimcaha 9-16) Lambaraka heeganka ee laga qabsado ballanta wakhtiga la samayn doono baaritaanka HIV-ga lagu baarayo (Isniinta Jimcaha ) /
EMPLOYMENT AND SUPPORT ALLOWANCE From 27 th October 2008 there is a new benefit, Employment and Support Allowance, for people who are claiming because they are sick or disabled and unable to work. It replaces
Repairing and Maintaining Your Home. Repairing and Maintaining Your Home. Great homes, positive people, strong communities
Repairing and Maintaining Your Home Repairing and Maintaining Your Home Great homes, positive people, strong communities 2 Repairing and Maintaining Your Home This leaflet will tell you about: The repairs
Section 2 Assessment The translation of each phrase is in the following order ARABIC BENGALI CHINESE CZECH FARSI FRENCH GUJARATI HINDI ENGLISH POLISH PORTUGESE PUNJABI SOMALI SWAHILI TURKISH URDU Assessment
You Y r ou ho ho e Asbestos
Your home Asbestos 2 Your home Large print format available If someone in your household needs this information in large print or as an audio recording please contact our Customer Service Centre on 020
Early Childhood Family Education (ECFE) 2014-2015 Class Catalog and Registration Invest in your child s future A program of Minneapolis Early Childhood Education Call 612.668.2127 or visit us online at
Kitaabka Quduuska ah ee loogu talo galay Carruurta. Soo-jeedinayaa. Sarakiciiddii
Kitaabka Quduuska ah ee loogu talo galay Carruurta Soo-jeedinayaa Sarakiciiddii Waxa qoray: Edward Hughes Waxa Tusaaleeyay: Janie Forest Waxa dhaqan-geliyay: Lyn Doerksen Waxa tarjumay: Zemendale Translation
Your Rights and Responsibilities A Charter for Consumers of the South Australian Public Health System National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry Title: Your rights and responsibilities
Bahda Mareegta Farshaxan RAMADAANTA:
RAMADAANTA: Mahadi waxay u sugnaatay Eebe(subxaanahuu watacaalaa), Rabi baanan gargaar iyo denbi dhaaf waydiisanayeynaa, waxaanan ka magangalaynaa sharka nafteena iyo camaladeena xun, ka uu Eebe hanuuniyo
DHS-2497-ENG 5-10 Long-Term Care Consultation Services Promoting and Supporting Independent Community Living Minnesota Department of Human Services Attention. If you want free help translating this information,
Kitaabka Quduuska ah ee loogu talo galay Carruurta Soo-jeedinayaa.
Kitaabka Quduuska ah ee loogu talo galay Carruurta Soo-jeedinayaa Sarakiciiddii Waxa qoray: Edward Hughes Waxa Tusaaleeyay: Janie Forest Qisada 54 ee 60 www.m1914.org Waxa tarjumay: Zemendale Translation
TENANTS GUIDE. Repairs and improvements
TENANTS GUIDE Repairs and improvements Contents Decoration 3 Repairs that you do 4 Repairs that we do 4 Right to Repair scheme 6 Priorities for repairs 8 Reporting repairs and getting the work done 11
Public consultation on a proposal to expand Hovingham Primary School
Public consultation on a proposal to expand Hovingham Primary School Consultation period 13 June 2016 to 8 July 2016 What is being proposed? Leeds City Council is consulting on a proposal to permanently
Spanish. Part I: Diseases, Conditions, Surgeries Quantity Form # English Title/Spanish Title Rev. Date
Helping Hands Non-English Order Form Page 1 of 18 Helping Hand Order Form These Helping Hands are available as of 9/24/12. The REV. DATE is the origination date or last revision, whichever is later. DIRECTIONS: